ईन्द्रेणी ले सचिन परियार लाई १२ कक्षासम्म निशुल्क पढाउने ! – AB Sansar
ईन्द्रेणी ले सचिन परियार लाई १२ कक्षासम्म निशुल्क पढाउने !
January 4, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on ईन्द्रेणी ले सचिन परियार लाई १२ कक्षासम्म निशुल्क पढाउने !
गुल्मी : गुल्मीका सचिन परियारको टिकटकमा एउटा भिडियो यतिबेला भाईरल बनेको छ । एक पत्रकारले लिएको अन्तरवार्तालाई काटेर बनाईएको उक्त भिडियोमा सचिनलाई तिमी स्कुल जाँदैनौँ भनेर सोधिएको छ । जवाफमा उनले पैसा छैन हजुर, पैसा दिनुपर्यो भर्ना गरिदिनुपर्यो भनेर भनेका छन् । झट्ट सुन्दा ठट्टा गरेजस्तो सुनिने उक्त भिडियोले गम्भीर भएर सोँच्दा साँच्चिकै भावुक बनाउँछ । आर्थिक अभावका कारण २ कक्षासम्म पढेर पढाईलाई बिचमै विश्राम गरेका उनको पढ्ने सपना अब भने पुरा हुने भएको छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
नाटकै हो नैटंकीनै हो’मा बन्यो पहिलो हास्य ब्याङ्ग भिडियो